December 1, 2020 RESTBET 501 RESTBET501 9
အဝါရောင်နှင့်အနီရောင်ကလပ်အသင်းဥက္ကchairman္ဌ Mustafa Cengiz ကသူသည်ထူးခြားစွာရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့်အထွေထွေညီလာခံတွင်သမ္မတလောင်းဖြစ်မဖြစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ Mustafa Cengiz သည်ကလပ်အသင်းဖောင်ဒေးရှင်းအစည်းအဝေးပြီးနောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့မှဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်မှ ၂၆ ရက်ထိရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပရန်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ Mustafa Cengiz “ဟုတ်ပါတယ်၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးစာရွက်စာတမ်းတွေပေးဖို့သွားခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပမ်းစားအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်ပြီးနောက်သူဟာ Ankara ကိုသွားခဲ့တာပါ။ အကြီးစားအစည်းအဝေးများကိုခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားတရားဝင်အသိပေးခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းကိုမယုံသောအချို့ရှိခြင်းသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ သူသည်တာ ၀ န်ရှိသလားကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခဲ့သည်။ တရား ၀ င်ဖြစ်စဉ်ကိုစောင့်ကြည့်သင့်ကြောင်းတရား ၀ င်တရား ၀ င်စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရခဲ့သည်။ ဘုတ်အဖွဲ့အစီရင်ခံစာကိုတောင်မှဖတ်။ မရခဲ့ပါ၊ ဥပဒေအရအကြီးအကျယ်ချိုးဖောက်မှုများကျူးလွန်ခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းဤထောင်ချောက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ငြီးငွေ့နေကြသည်။ ။
သူသည်အဝါရောင်နှင့်အနီရောင်ကလပ်တွင်ထပ်မံဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်လားဟူသောမေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ Mustafa Cengiz “ငါဟာသမ္မတလောင်းဖြစ်မလားဆိုတာကိုပြောခွင့်ပြုပါ။ မေလ ၇ ရက်နေ့ကစပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုဘယ်သူမှငါ့ကိုမမေးခဲ့ဘူး။ ငါကဲ့ရဲ့ခြင်းအဘို့ငါမပြောတတ်ပါကအတော်လေးသဘာဝဖြစ်ပါသည်။ သင်နေမကောင်းလျှင်, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာဘာလုပ်နေလဲ။ သင်အစေခံရန်သွားလျှင်, သင်ကျန်းမာပါလိမ့်မည်။ ငါ၏အဖြစ်စဉ်ကိုအခုအချိန်မှာကောင်းစွာတိုးတက်နေပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှလုပ်ရပ်ဘယ်အချိန်မှာဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။ ငါတတ်နိုင်သမျှငါ့အဘို့, ငါတို့နှလုံးပေးသောအရာတစ်ခုခုသည်။ ငါပြင်ပကနေကြည့်ရှုသောအခါဤသည်စိတ်ပျက်ဖွယ်ပုံရသည်။ ငါတိုက်ခိုက်ရန်အနေအထား၌မဖြစ်ကြောင်းကိုမဟုတ်သလိုငါနိုင်ငံရေးထဲသို့ဝင်ပါလိမ့်မယ်မဟုတ်သလိုစီးပွားဖြစ်ကအကဲဖြတ်ရန်အခွအေနေရှိသည်မဟုတ်။ ငါနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်၏။ ငါ့အလုပ်အကိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ငါစီမံခန့်ခွဲဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်သမျှ။ ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်၏မိသားစုနှင့်ဆရာဝန်များကိုကြည့်ရှုပါကသူတို့သည်ကျွန်ုပ်အားအတိတ်ကာလမှလွတ်မြောက်ခြင်းမှထွက်ခွာသွားစေလိုသည်။
ဒါ့အပြင် Mustafa Cengiz “သူတို့အားလုံးဟာတန်ဖိုးရှိလူတွေဖြစ်ပြီးသူတို့အားလုံးဟာ Galatasaray ကပါ။ ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးဖြစ်ချင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာတစ်ဖက်ကလုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ဒီဟာကဒိုင်းနမစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်ရွေးကောက်ပွဲမှာငါတို့နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်စွဲမှာမျှော်လင့်ထားတယ်။ ဒီစာမူကိုထားမထားဖို့ငါတို့ခုခံတွန်းလှန်နေတယ်လို့ထင်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်။ အတူယှဉ်ပြိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Er Square ကိုဖွင့်လှစ်နေပါသည်။ အသုံးပြုထားသောအသုံးအနှုန်းများ။
BETBOO868 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! RESTBET501 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! SULTANBET542 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! SUPERBAHİS630 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! SUPERBAHİS29 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! SUPERBAHİS221 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! RESTBET501 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! BETBOO868 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETBOO868 BEŞİKTAŞ’TAN OĞUZHAN ÖZYAKUP AÇIKLAMASI BETBOO868 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER
9 Comments on BETBOO868 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER!
GÖRKEM December 1, 2020 at 2:00 pm
HANDE December 1, 2020 at 9:30 pm
restbet giriş ödeme sorunu yaşatıyor mu
BAŞAK December 5, 2020 at 12:50 pm
restbet canlı bahis lan olum üyeliğim silinmiş. yoo şifreyi mi unuttum acep
GÖKSEL December 6, 2020 at 10:10 pm
ERTAN December 8, 2020 at 4:50 am
restbet canlı bahis yüksek oranlar sunuyor mu
SERDAR December 8, 2020 at 10:20 pm
TİBET December 9, 2020 at 7:30 am
restbet casino kullanışlı ürünleri olan hızlı site ile her zaman kazanabilirsiniz.
GÜLİZ December 14, 2020 at 5:00 am
MAHSUM December 14, 2020 at 8:10 pm
restbet kayıt yeni adresi nedir ki bu sitenin hala giriş yapamadık lan